DataNumenUmgaqo-nkqubo Wokubuyiselwa Kwemali
Ikhaya Policy Refund
Sizithembile ngomgangatho weemveliso zethu kunye neenkonzo zethu kangangokuba sinikezela ngezi ziqinisekiso zintathu zilandelayo kwiintsuku ezingama-30 zokuthenga kwakho, ukuqinisekisa ukuba wanelisekile nge-100%.
Sinikela eyona iimveliso zokubuyisela idatha kunye neenkonzo emhlabeni. Kungenxa yoko le nto sidale yethu Esona siQinisekiso sokuBuyisa iNgxelo ™ -Siqinisekisa ukuba iimveliso zethu kunye neenkonzo ziya kufumana ubuninzi beenkcukacha kwifayile yakho eyonakeleyo, kwinkqubo okanye kwizixhobo. Ukuba ungafumana isixhobo esinokufumana idatha ngaphezulu kunesethu, siya kuyibuyisela iodolo yakho ngokupheleleyo!
Esi siqinisekiso siqinisekisa indima yethu yobunkokeli kunye nokuzibophelela kubathengi bethu. Siyinkampani yokuqala kunye nokuphela kwedatha yokubonelela ngesiqinisekiso sokubuyisa imali, sibonisa ukuzithemba okukhulu kwiimveliso zethu.
Ngolwazi oluthe kratya, nceda ucofe Apha.
Zonke iimveliso zethu zithengiswa kwimowudi yokuthenga ngaphambi kokuthenga. Oko kukuthi, unokukhuphela kwaye usebenzise ingxelo yedemo ukubuyisa ifayile yakho eyonakeleyo, ngaphandle kwentlawulo. Ukuba le fayile inokuphinda ifumaneke, ingxelo yedemo iya kubonisa ukujonga kwangaphambili imixholo efunyenweyo, okanye ivelise ifayile yokubonisa, okanye zombini. Ngokusekwe kwiziphumo zenguqulo yedemo, ungazi ukuba idatha oyifunayo inokuphinda ifumaneke okanye hayi.
Emva koko, emva kokuba uthenge ingxelo epheleleyo, ukuba ifayile elungiswe yinguqulelo epheleleyo ayihambelani neziphumo zenguqulo yedemo, siya kuyibuyisela iodolo yakho.
Isiqinisekiso sokwaneliseka kwe-100%
Nangona ezi ziqinisekiso zingasentla zihlala ziqinisekisa ukuba ufumana okona kulungileyo kunye most iziphumo zokufumana kwakhona ngokwanelisayo, siya kwelinye inyathelo, ngokubonelela ngesiqinisekiso sokwaneliseka esiyi-100%. Ukuba nangasiphi na isizathu, awonelisekanga yile mveliso okanye inkonzo oyithengileyo, emva koko unokufumana imali epheleleyo.
Qaphela: Kuya kufuneka unikezele ngesizathu sokubuyiselwa kwemali kwiinkcukacha. Ukuba kukho imfuneko, ifayile eyonakeleyo yoqobo iyafuneka ngenjongo yokuqinisekisa kuphela. Ifayile yakho kunye nedatha ziya kugcinwa ziyimfihlo eyi-100%. Bona eyethu umthetho wabucala ngeenkcukacha ezithe kratya. Ukuba kukho imfuneko, siya kutyikitya i-NDA nawe ukuqinisekisa oku.